Yini ama-scholarships aphezulu futhi yiziphi izinzuzo ezilethayo? | Ukwakheka nezifundo
Yini ama-scholarships aphezulu futhi yiziphi izinzuzo ezilethayo?
UMaite Nicuesa | 10/09/2021 16:03 | Kubuyekezwe ku- 10/09/2021 16:05 | Scholarship
Yini ama-scholarships aphezulu futhi yiziphi izinzuzo ezilethayo? Ngesikhathi sempilo yokufunda, kungenzeka ukuthi ufake isicelo sezinsizakusebenza ezahlukahlukene zokufunda ngokubiza izifundiswa ezahlukahlukene. Isiphakamiso ngasinye sinenhloso ethile, njengoba ubona esikhangisweni. Inhloso enkulu yeminye imifundaze ukukhuthaza ukwenza kahle, njengoba sizoxoxa ngezansi. Lokho wukuthi, ukwazisa umzamo walabo bafundi abanerekhodi elihle. Bathole amamaki aphezulu ezivivinyweni. Khumbula ukuthi yonke imifundaze nayo inenqubo yokukhetha.
Izidingo ngokuvamile zifuna kakhulu. Isibonelo, umfundi kungadingeka akhombise isilinganiso esiphakeme sokwenza isicelo sakhe futhi abe nezinketho zokuthola lokho. Kumele kukhunjulwe ukuthi, ngokuvamile, inani lezicelo liphakeme kunokunikezwa kosizo olubizwa ngosuku oluthile. Futhi, ngenxa yalokhoEncia, inqubo yokukhetha ibalulekile ukukhetha abazobhapathizwa ekugcineni.
1 Usizo lwabafundi basekolishi
2 Qaphela umzamo wabafundi
3 Thuthukisa ubuhle obusuka eyunivesithi
Usizo lwabafundi basekolishi
El ukuqala kweyunivesithi umongo wesikhathi esibaluleke kakhulu empilweni. Lesi sahluko asikhuthazi kuphela ukuqeqeshwa okuqhubekayo, kepha futhi nokuthuthuka komuntu siqu. Umfundi uxhumana nemvelo yamasiko neyabantu emvumela ukuba akhule futhi aguquke njengomuntu.
Lesi sikhathi silungiselela ukubhekana nempilo yokusebenza ngezinsizakusebenza ezengeziwe namakhono. Yize umgomo ubalulekile, into ebaluleke kakhulu wukuphila inqubo eyedlule ngokuqaphela. Izifundo ze-Excellence ziqondiswe kubafundi baseyunivesithi. Izinhlangano ezahlukahlukene zaseyunivesithi zikhuthaza lolu hlobo lwezinyathelo.
Qaphela umzamo wabafundi
Inhloso yosizo akukhona ukuxhasa kuphela labo bafundi abanamabanga amahle kakhulu. Ukuqashelwa okunikezwayo kusebenza kahle ekukhuthazeni komfundi. Imiphumela etholakele ikhombisa amandla nekhono lakho. Kodwa-ke, impilo yezemfundo inamandla futhi izimo zingashintsha kwezinye izifundo.
Izifundo ze-Excellence ziyisimemo sokugcina ileveli efinyelelwe kuyo yonke inqubo yokufunda. Lokho wukuthi, ezifundweni ezakha uhlelo lokwenziwa kuze kufinyelelwe lelo banga. Umgomo okudingeka uzivocavoca kuwo ukungaguquguquki, ukuqina, ukuhlela, ukutadisha, ukubuyekeza, ukugxila, ugqozi lwangaphakathi nokubekezela.
Ukuphathwa kwesikhathi, ukuzibandakanya emakilasini nokuzinikela ohlelweni lokufunda kuthatha indawo ebalulekile. Isifundi sihlola imiphumela etholakele ngonyaka wokufunda ngaphambi kokwenza isicelo esisha. Futhi ngenxa yalokho, ingabuye ivuselelwe ngale konyaka wokuqala. Abafundi kumele babhalise esikhungweni seyunivesithi ukuze bathathe iziqu ezisemthethweni futhi babe nezinga eliphakeme kwirekhodi labo lokufunda.
Thuthukisa ubuhle obusuka eyunivesithi
Ukufuna ubuhle emkhakheni wobungcweti kuyinjongo ejwayelekile emphakathini wanamuhla. Ukuvelela kukhombisa inguqulo enhle kakhulu yochwepheshe futhi, futhi, yenkampani. Ngakho-ke, ukuzibophezela ekuziphendukeleni okuqhubekayo nakho kungahlakulwa esigabeni senyuvesi.. Futhi, kwesinye isikhathi, ukufaneleka okutholwayo kukuvumela ukuthi ufanelekele ukuthola usizo olubaluleke njengalolu.
Kunemininingwane eminingi eyenza ukuthi umuntu aqale kabusha ikhandidethi, njengoba ubona kokuhlangenwe nakho kwakho. Kubalulekile ukugqamisa leyo mininingwane yobungcweti noma yezemfundo eqinisa uphawu lomuntu siqu. Ukuthola umfundaze wokwenza okuhle ngesinye sezici isitshudeni esincane esingazisho encwadini yaso yokufaka isicelo sokuthola isikhundla. Isikweletu esibalulekile salokho esikumele.
Ukuvelela umqondo oxhumene ngqo nobuntu. Yigama elikhombisa ukuzithuthukisa okukhona kulabo ababandakanyekayo ukufeza izinhloso zabo. Yini ama-scholarships aphezulu futhi yiziphi izinzuzo eziletha kumbono wakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » IYunivesithi » Scholarship » Yini ama-scholarships aphezulu futhi yiziphi izinzuzo ezilethayo?
Iziqu ze-5 zaseyunivesithi ezingabantu